Waxbarashada & Akhlaaqda Ubadkaaga la soco.= Nasashada Jimcaha. Q-113aad=. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Waxbarashada & Akhlaaqda Ubadkaaga la soco.= Nasashada Jimcaha. Q-113aad=.
Waxbarashada & Akhlaaqda Ubadkaaga la soco.= Nasashada Jimcaha. Q-113aad=.
1- Gabar 19 jir ah ayaa Aabaheed ku tiri: Aabe fasaxaan ma waxaad aadee Afgoi mise Qolka Dhafarka iyo shiishada ee Liido?. Aabihii oo marqaansan ayaa ku yiri: Liido ayaan aadayaa. Gabadhii ayaa ku tiri: Sababtana, Aabihii ayaa ku yiri: Afgoi horaan u tagay, laakin Liido weli ma tagin.
Aabihii ayaa ku yiri: Gabadheydey, Adiguna fasaxa Isgoolka xageed aadi laheyd, waxa ay tiri: Afgoi. waxa uu yiri: Sabab, waxa ay tiri: Qolkaa Liido horaan u tagay. Aabihii oo yaaban,Yaah, Qof yar baad tahaye, side? . waxa ay ku tiri: wiilka deriskeena ay ee ka yimid London, Cabdi qurbo ayaa mar hore i geeyay. ( Fiiri Sawirka 1aad).
(Xaaladda Deriskaaga la soco,Somalidaa ku maahmaahda “Deriskaagu kumana Cadeeyo, kumana madoobeeyo ee sida uu yahay ayuu kaa dhigaa” Deris khayr qaba).
2- Wiil qurbaha ka yimid ayaa arkay Abkoowgiis oo maalin kasta kitaabka Qur’aanka aqrinaya, waxa uu ku yiri: Awoowe, Aabe sidaan Buugaagta uma aqriyo ee adigu imtixaankeed diyaarinee.
( Ubadka bar in uu Quraanka Aqriyo maalin kasta, si uuna Waalidkaa & Bulshada kugu hor ceebeyn,Ceeb kalena yuuna Qiyaamaha kuu keenin).
3- Gabar Ardayad ah ayaa Hooyadeed ey weydiisay. Saacadaan Isgoolka kama imaan jirin ee maxaa ku keenay waqtigaan?. waxaa uu ku tiri: Hooyo, waxaan ka jawaabay su’aal Ardayda oo dhami ey ka baqeeyn in ay ka jawaabaan.
Hooyadii ayaa ku tiri: Waan kugu ogaa Aqoontaa, maxeey aheyd su’aashu?.waxa ay tiri: Hooyo, Waxaa nala weydiiyay, yaa macalinka dhagaxa ku dhuftay?. Waxaana ku jawaabay Aniga. (F.S: 2aad).
( Nin masuul ahaa ayaa yiri: waxaan soo Saxiixay heshiis Somaalidu ay ka baqayn inay Saxiixaan.Muxuu Ahaa heshiisku?…………)
4- Macallimad ayaa ku tiri: Hooyo Faadumo, wiilkaagu maanta waxa uu sameeyay wax aynan Ardayda kale sameeyn Karin, ma Aabihii ayuu ka keenay mise Hooyadii?.
Hooyo Faadumo ayaa tiri: war aniguu iga keenay wanaaga & Fahamka uu Ardayda kale uga hor maray ee muxuu sameeyay?. Macalimadii ayaa ku tiri: khamri ayuu cabay. ( F.S:3aad)
(Weligaa warbixinta oo aan laguu dhameystirin, Go’aan ha qaadan!!!).
5-Hooyo ayaa odaygeedii ku tiri: Mar kasta oo aan lacag meel dhigto, wiilkani waa iga xadaa. Aabihii ayaa ku yiri: Buugtiisa dhax gali Lacagta!. Hooyadii ayaa ku tiri: Sabab? Aabihii ayaa ku yiri: Weligii ma furayo Buugaagta, ma isagaaba wax aqriyo. (F.S: 4aad).
(Haddii uu nin mas’uul ah Lacagta xadayo, sheeg meel aan ku ridno oo uunan weligiis ka Fiirineyn?)
6-Wiil arday ah ayaa hooyadii ku yiri: Hooya maanta imtixaankii waa la soo dhajiyay, waxaana helay 100 buundo. Hooyadii oo ku faraxday 100ka Buundo ayaa ku tiri: Maadadee?, waxa uu yiri: Xisaabta=10, Ingriiska=20, Biology=20, Kimistray= 5, carabi 15, Fisikis= 30. Soow Boqol ma ahan!.
( Haddii qof Masuul ahi ku yiraa: Dhaqaaluhu waxa uu kordhay 100%. Weydii, Qaybaha Dhaqaale ee kobcday, iyo kobaco jeebka uu isbedelka ku sameeyay ma kiisa, mise waa kaaga).
La soco xaalada Ubadkaaga.